Dhimasho Iyo Dhaawac Laga Dhaxlay Isbuurasho Ay Sameeyeen Taageerayaal Kubadda Cagta Ah Dalka South Afrika | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Dhimasho Iyo Dhaawac Laga Dhaxlay Isbuurasho Ay Sameeyeen Taageerayaal Kubadda Cagta Ah Dalka South Afrika
Laba taageereyaal ah ayaa geeriyooday kadib markii ay isbuurteen taageerayaal kubadda cagta ah kulan ka dhacay dalka South Afrika, wuxuuna ahaa kulan kama dambeys ah oo ay isaga hor imaanayeen kooxaha Kaizer Chiefs iyo Orlando Pirates oo ka mid ah kooxaha darajada sare ee dalkaas.
Kulanka wuxuu ka tirsanaa koobka Carling Black Label Cup kaas oo lagu ciyaarayay garoonka caanka ah FNB stadium.
Kulankaan waa mid ka mid ah darbiyada ugu adag ee dalkaas laga ciyaaro, waxaana xusid mudan in laba isbuuc ka hor si hormaris ah loo iibsaday tikidhadii.
Si kastaba kulanka wuxuu kusoo dhamaaday iyadoo musiibo ay ka dhacday kadib markii ay taageerayaasha is buurteen waxaana halkaas ku dhintay laba qofood sidoo kalana 19-qofood ayey dhaawacyo kasoo gaareen.
Baaritaano hordhac ah oo ay sameeyeen Booliiska waxaa lagu ogaaday in musiibadaan ay ka timid kadib markii ay is riix-riixeen taageerayaasha xiligii ay soo galayeen albaabka . “dad tiro badan ayaa isku dayay iney albaabla soo galaan” ayuu yiri afhayeen u hadlay booliska oo la hadlayay News 24.
“Waa inaan surnaa baaritaanada dheeriga ah kadib inta aan lasoo afjarin”
Dhanka kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta South Afrika Dr Danny Jordaan ayaa shaaca ka qaaday in baaritaano dheeraad ah la sameyn doono.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay South Afrika ka dhacaan musiibooyin 2001 ayey aheyd markii is-riix-riixaan oo kale ay ku geeriyoodeen 43-ruux.